အဖြူရောင် - Pearl Sapphire - Wattpad
By PearlSapphire Completed
# Update will start on July, Every Sunday update! Pairing - Eunhae, 18+, ****reminded about the dirty words usage****, bad characters.
Reminder - ညစ်ညမ်းစာလုံးအသုံးပြုမှုများ နဲ့ ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်လုံးပြည့်တန်ဆာပါ။ ကျေးဇူးပြုပီး အဲလိုဇာတ်ရုပ်မျိုးမကြိုက်ခဲ့ရင် ရှောင်လို့ရအောင်ပါရှင်။
- ဖတ်ဖူးတဲ့ Eunhae one-shot လေးတစ်ပုဒ်က အိုင်ဒီယာရထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် အခုပြန်ရှာတာ Author လဲမမှတ်မိ၊ ခေါင်းစဉ်လဲမမှတ်မိတာကြောင့် လုံးဝရှာမရတော့ပါ။ အဲဒါကြောင့် ဒီမှာ ခရက်ဒစ်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ နားလည်ပေးပါ။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးလေးကို ယူပီး ချဲ့ကားပီးရေးထားတာပေါ့နော် :D
- မူရင်းရေးထားတဲ့သူရဲ့ one-shot လေးက တော်တော်ကောင်းပါတယ် ...ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ပဲ မှီငြမ်းချဲ့ကားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အချဲ့ကားမတတ်ပဲ ပျင်းစရာကောင်းခဲ့ရင် ကျမရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုပါ။ ကြိုပီးတောင်းပန်ပါတယ်။
Eunhae718 Jun 09, 2016
teaserလေးကတောင်မိုက်နေပြီ…updateစာင့်နေပါ့မယ်…The boy who love me so much ကိုလည်းမျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့မျှော်နေပါတယ်လို့…T_T
Cutie_Cloud Jul 24, 2016
အကြည့်တချက်မှာ lee hyuk Jae တို့ လုံးဝ ကို ပါသွားတာပဲ
အရေးအသား အရမ်းကောင်းတယ် author nim
soelae Jul 24, 2016
EunhaeDevil Jul 24, 2016
Awww... အ​ရေးအသား​တွေနဲ့ သတ်​ပြန်​ပြီ​ပေါ့ author nim ရယ်​ x')
BabyzChanKaiWinner Jul 19, 2016
teaserနဲ့တင်​​ကြွေ​နေပီ​လေ!! မတင်​​သေးဘူးလား author ..​မျှော်​​နေပါတယ်​လို့
Baekhsu Jul 24, 2016
Get notified when အဖြူရောင် is updated
#97 in boyxboy See all rankings
31.5K 2.9K 110
ကျွန်တော်ဟာ အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ယောက်ပါ.. ထပ်ပြီး ရှင်းရှင်းပြောရရင် သာယာချမ်းမြေ့သော မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲကို သူဝင်ရောက်လာချိန်ကစပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့သာယာနေတဲ့ဘ၀လေးဟာ မုန်တိုင်းတွေထန်လာခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုသေးသေးလေးတစ်ခုက အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားကြီးလေးလှတဲ့ဝေါဟာရကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင် တွန်းလှန်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိမှန်း တကယ်ကြုံဖူးမှသိလာရသောအခါ…..
ပညာမတတ်သောကျွန်တော်မှာ ငယ်ငယ်လေးတည်းက မိဘမဲ့တစ်ကောင်ကြွက်နေခဲ့ရပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ရုန်းကန်နေရသူတစ်ဦးပါ.. ကျွန်တော့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့် ကျွန်တော့်ကို လိုချင်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပေမယ့်လည်း အချစ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မမြည်းစမ်းဖူးခဲ့ပါဘူး… ဘ၀တစ်သက်တာမှာအချစ်ဆိုသည
91.2K 9.7K 707
ဒါပေမဲ့ မောင် ကတော့ ဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
မောင် ရယ် .........
Wattpad မှာ ပထမဆုံးရေးတဲ့ fic ကလေးပါ သည်းခံပေးကြပါ
25.7K 2.4K 100
My First Ancient Story !!!
The boy who love me so much .....
28.6K 2.5K 148
Lee Donghae: "Lee Hyukjae is my religion."
- update on every Sunday night
ငါ တစ်ခုဝမ်းသာမိတာကလေ ငါမမှတ်မိတဲ့ င့ါအတိတ်မှာ  ခုချိန်ထိ ဘာမပြောင်းလဲဘဲကျန်နေသေးတဲ့ မင်းနဲ့ငါရဲ့သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကို သိလား...ငချမ်း
ကိစ္စတချို့မှာတခါတခါ ငြင်းဆန်နေခြင်း ငြိမ်သက်ခြင်းက ဖြေရှင်းဖို့ပိုမြန်သလို
အသည်းကွဲမှုမှာ ငိုကြွေးနေခြင်းထက် ပြုံးရယ်နေရခြင်းက  ၀ိဥာဉ်ကိုချုပ်ငြိမ်းစေတယ်ထင်ပါတယ်...............
ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့ရင်တောင် သူရဲ့ရယ်သံအချို့အတွက် လဲရကျိုးနပ်တယ်မဟုတ်လား..........
ထုံးစံအတိုင်း ချမ်းလေး တစ်ယောက်တော့ရှည်ပြီး စလိုက်ပြန်ပြီ နော်
2.5K 374 38
33.7K 2.9K 202
ဘယ်အရာနေနေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်လို့ ထက်ပိုင်ခန့်လို့ခေါ်တာ...#
အကိုခန့်အနားမှာ ကျနော်က တစ်ခဏပဲနေပြီး ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားရမဲ့လူ..
အချိန်ခဏတာပဲ တည်ရှိနိုင်တဲ့တိမ်လိုမျိုး ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ဘ၀ကို မိဘတွေက ကြိုသိခဲ့ကြလို့ထင်ပါရဲ့ ပေးခဲ့ကြတဲ့နာမည်က တိမ်ယံတဲ့လေ...#
နိုင်သူဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့ မင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငါရခဲ့တာတွေက အရှုံးတွေချည်းပဲ တကယ်တော့ငါဟာ နိုင်သူ မဟုတ်တဲ့ ရှုံးသူပါ...#
7.6K 768 43
အမှတ်တရတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲရင်း...
ငြိမ်သက်နေတဲ့ ကိုယ့် နှလုံးသားကို
ကခုန်စေတဲ့ သူက မိန်းကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး...
30.3K 3.2K 514
ဒါ ကျ​နော့်​ရဲ့ first ocပါ based on true story​နော်​ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျ​နော်​
A.E.O.N.S (Translated)(One Shot)
4.9K 281 27
This story is Translated from my all time AFF favorite author  cc_kouga (Profile -@https://www.asianfanfics.com/profile/view/840795) with Author's permission.
You may read the Original story at https://www.asianfanfics.com/story/view/1000221/1/a-e-o-n-s-eunhae--hyukhae
Warning: 18+, boy to boy love
Hope you enjoy and thanksalot again for your permission to cc_kouga. :D
All credit goes to Original Author: cc_kouga and apologies in advance if the translation is not smooth and complicated. It's all me, my fault for weakness of translation.
A/N: ဘာသာပြန်ဆိုပေမဲ့ တစ်ကြောင်းချင်းဆီ အတိအကျကြီးပြန်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဇာတ်လမ်းသဘောပဲယူပီး တတ်နိုင်သလောက် ဆိုလိုရင်းနဲ့မလွဲအောင်ထပ်ရေးထားတာမို့ ဇာတ်လမ်းထောက်ပီး အရေးအသားမကောင်းခဲ့ရင် ... မူရင်းရေးသူကြောင့်မဟုတ်ပဲ ကျမ၏ညံ့ဖျင်းမှုသာ ဖြစ်သည်မို့ ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့။
အရင်တင်ထားတဲ့ တစ်ဝက်တစ်ပျက်အပိုင်းကို ဖျက်ပီး အသစ်ပြန်ရေးထားပါတယ်၊ ပထမပိုင်းက အရမ်းထောက်နေလို့ပါ .... ဖတ်ပေးပါအုံးနော် .... <3